Mabda'a shaqada ee mashiinka samaynta nitrogen
PSA cadaadiska lulida adsorption habka wax soo saarka nitrogen mabda'a nitrogen shaandhada molecular Kaarboon waxay nuugi kartaa oksijiinta iyo nitrogen hawada isku mar, awoodeeda xayeysiisku waxay sidoo kale kordhisaa korodhka cadaadiska, iyo isla cadaadiska oxygen iyo dheellitirka nitrogen adso ...
Hawlgalka wax soo saarka argon ee qaybta kala-soocidda hawada waa mid adag.
Wadarta hagaajinta argon waa in la kala saaro ogsijiinta iyo argon ee tiirka argon cayriin si loo helo argon cayriin oo leh oksijiin wax ka yar 1 × 10-6 si toos ah, ka dibna laga sooco argon ganaax si loo helo argon wanaagsan oo nadiif ah 99.999%. Iyada oo si xawli ah u kobcaysa tignoolajiyada kala soocida hawada iyo...
Sababta falanqaynta fashilka mashiinka qabow iyo qalalan
Qofka sida magaciisa ka muuqata waxaa loo isticmaalaa qalabka qaboojinta ee shayga, kala duwanaanta codsiga waa ballaaran, inta badan waxaa la arki karaa guud ahaan waxaa loo isticmaalaa qayb ka mid ah kombaresarada sare ee cadaadiska, codsiga caadiga ah iyo habka hawlgalka, waxaan si lama filaan ah ula kulmi doonaa qof. cillad la'aan, marka xigta waanu wada shaqaynaa...
Qalajiyaha ma in lagu rakibaa gadaashiisa kombarestarka hawada?
Qalajiyaha ma in lagu rakibaa kombaresarada hawada qalabka daaweynta ka dib? Jawaabtu waa haa, haddii ganacsigaagu uu faa'iido u leeyahay kombaresarada hawada, waa inaad ogaataa in kombaresarada hawada lagu rakibo qalajiyaha kadib. Ka dib kombaresarka hawada, haanta kaydinta hawada, filter iyo qalajiyaha iyo kuwa kale
Qalabka kala-soocidda gaaska: deegaanaynta weli waa mudnaanta koowaad
Caadiga cusubi wuxuu ahaan doonaa mawduuca ugu muhiimsan ee 13-aad ee muddada Qorshaha Shanta Sano. Marka la eego dhinacyada kala duwan ee codsiga qalabka kala-soocidda gaaska, ka dib horumarinta shanta sano ee 12-aad, Batroolka, kiimikooyinka, bacriminta, birta, qalabka dhismaha, mashiinnada iyo beeraha kale, iyo sawir ...
Qaar ka mid ah codsiyada warshadaha ee nitrogen
Inta lagu jiro habka wax soo saarka warshadaha, sunta iyo waxyeellada, qallafsan, kuwa guban iyo walxaha qarxa waxay u baahan yihiin in lagu ilaaliyo gaas aan shaqaynayn. Nitrogen, oo ka mid ah gaaska aan shaqayn, waxa uu leeyahay il qani ah oo gaasta ah, oo ka kooban 79% hawada, waxaana si isa soo taraysa loogu isticmaalay wax soo saarka. Halkaa joogo...
Isticmaalka iyo hababka diyaarinta caadiga ah ee nitrogen
Marka hore, dabeecadda nitrogen ee Nitrojiin, xaaladaha caadiga ah, waa mid aan midab lahayn, dhadhamin, gaas aan ur lahayn oo badanaa aan sun ahayn. Nitrojiinka ayaa 78.12% ka ah guud ahaan jawiga guud (mugga jajabka). Heerkulka caadiga ah, waa gaas. Cadaadiska jawiga caadiga ah, waxa uu noqonayaa l...
Codsiga qaybta kala-soocidda hawada ee warshadaha birta iyo birta (dhalaalida foornada qaraxa caadiga ah iyo habka dhimista dhalaalka iyo xisaabinta oksijiinta)
Tiro badan oo gaas warshadeed ah sida ogsijiin, nitrogen iyo argon ayaa loo isticmaalaa habka dhalaalidda ee shirkadaha birta iyo birta. Ogsajiinta inta badan waxaa loo isticmaalaa foornada qaraxa, dhalaalidda foornada dhalaalidda, beddelka, dhalada foornada korontada; Nitrojiinka waxaa inta badan loo isticmaalaa daboolida foornada, prot ...
Waa maxay kala-soocidda hawadu? Qalabka kala soocida hawada iyo habka nidaamka ayaa muujinaya
Qof kastaa wuu yaqaanaa dhammaan noocyada kombaresarada iyo marawaxadaha uumiga, laakiin dhab ahaantii ma fahantay doorkooda kala-soocidda hawada? Aqoon-is-weydaarsiga kala-soocidda hawada ee warshad, ma garanaysaa sida ay tahay? Kala soocida hawada, si fudud loo dhigo, waxaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro qaybaha kala duwan ee gaasta hawada, ...